Google koa dia manafoana ny hetsika an-tserasera ho an'ny mpamorona | Vaovao IPhone
Tamin'ny 3 martsa, nanambara i Google fa noho ny coronavirus, dia nofoanana ny hetsika kasaina hatao miaraka amin'ny vondrom-piarahamonina developer, Google I / O 2020, hetsika efa nomaniny atao amin'ny antsasaky ny volana Mey, toy ny taona maro. Tao anatin'ilay fanambarana dia nilaza ilay goavambe fikarohana fa hatao amin'ny Internet ny fampisehoana.
Na izany aza, toa tamin'ity taona ity, Google dia nanapa-kevitra ny hanafoana tanteraka ny fihaonambe tsy hihazona ny Google I / O 2020. Ny antony nomen'ny orinasa tsy nitana ny hetsika dia ny tsy fahafahan'ny fanangonana ireo fitaovana ilaina handraketana ny fampisehoana sy ireo atrikasa samihafa nokasaina hataony.
Inona no tokony hatao? Manoro hevitra ny State of California sorohy ny fiangonan'ny olona tsy ilaina. Tsy afaka nanangona ireo fitaovana ilaina izy nefa tsy nandika ity didim-panjakana vaovao ity, dia tsy nanan-tsafidy afa-tsy ny hanafoana azy tanteraka. Ao amin'ny fanambarana, Google dia nilaza fa hanao izay rehetra azo atao mba hananan'ny mpamorona ny fampahalalana rehetra ilaina amin'ny alàlan'ny vavahadin'ity vondrom-piarahamonina ity.
Nofoanan'ny Microsoft ihany koa ny hetsika manokana kasaina hataon'izy ireo, Build 2020, izay kasaina hatao amin'ny faran'ny volana Mey. Apple dia nanaraka ireo dingana ireo ihany tamin'ny fanafoanana ny WWDC 2020. Ireo orinasa roa ireo, nmanasa anao amin'ny hetsika an-tserasera izy ireo fa halefan'izy ireo hanolotra ny vaovao rehetra izay ho tonga amin'ny kinova manaraka amin'ny rafi-pandidiana sy ny fampiharana azy ireo
Mety nofoanana ve ny WWDC 2020?
Ny lalàna manalavitra ny olona tsy ilaina any California dia misy fiantraikany amin'ny Apple ihany, fa tsy Microsoft, satria ity farany dia miorina ao Redmond (Washington). Amin'izao fotoana izao Samy tsy nanambara ny fanafoanana ny hetsika an-tserasera ireo orinasa roa ireo, fa azo heverina fa ny orinasa roa tonta koa dia terena hanafoana ny fampisehoana, na farafaharatsiny Apple.
Amin'izao fotoana izao, ny azontsika atao dia ny miandrasa mijery ny fivoaran'ny areti-mandringana any Etazonia Ary raha misy izany dia manery orinasa hafa hampiato ny hetsika nokasain'izy ireo hatao an-tserasera.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » Google koa dia manafoana ny hetsika an-tserasera ho an'ny mpamorona
Ny Apple TV manaraka dia hanana hatramin'ny 128GB sy Mode ho an'ny ankizy